LinkedIn Mbiri Yekutungamira: Iyo Yekupedzisira Yekutungamira Gwara kune Mastering LinkedIn
Iyo Yekupedzisira Nhungamiro yekuvaka Iyo Yakakwana LinkedIn Mbiri
Chipiri, February 9, 2021 Chipiri, January 11, 2022 Douglas Karr
Pane toni yekusagadzikana izvozvi mubhizinesi chikamu. Ini pachangu ndakaona akawanda emabhizimusi madiki akadurura zvekushambadzira zviwanikwa mukati mehosha uye zvine chekuita nekukiya. Panguva imwe chete, zvakadaro, ndanga ndichiona mabhizinesi emakambani achitambura kuti awane tarenda nehunyanzvi.
Ndanga ndichirayiridza pachangu vanhu vazhinji mumaindasitiri angu kuti vachinje zvinotariswa zvemaprofiles avo eLinkedIn uye ruzivo kumakambani makuru. Mune chero kusagadzikana kwezvehupfumi, makambani ane homwe dzakadzika anoona mikana yekudyara, kuhaya, uye kugadzirira chikamu chavo chinotevera chekukura. Mabhizimusi madiki haashaye mari yekuita izvi.
Isu takatoburitsa akati wandei einfographic guides pane LinkedIn Profiles, kusanganisira Linkedin Mbiri Matipi uye Kugonesa a LinkedIn Mbiri Yekutengesa Zvemagariro, asi izvi Yekupedzisira Cheat Sheet kubva kuLeisure Jobs inyanzvi uye inonakidza sosi yekuona kuti iwe uzadzise zvakakwana LinkedIn yekudyidzana uye kutsvaga basa.
Wanga uchiziva zvakazara zvakanyatsogadziriswa Linkedin chimiro ndeye makumi mana nguva yekuwana mikana yemabasa?
Yekupedzisira Nongedzo kune LinkedIn Profiles inosanganisira 7 Matanho
Yakakwana Mbiri Blueprint - Zviitire iwe nyanzvi yekutora mifananidzo kuti utore humwe hunhu mune iyo pikicha, uye zadza muminda yese iyo LinkedIn inofamba iwe kuburikidza! LinkedIn mapikicha anoisa yakakosha yekutanga fungidziro.
Mifananidzo Saizi - Yakanaka mienzaniso yemasikirwo anotaridzika zvakanaka pane chero chishandiso, ive shuwa yekutevera iwo maratidziro ayo LinkedIn anopa uye ayo akanyorwa pazasi mune infographic.
Kuparadzira kweMazano - Kana mumwe munhu akakuudza kuti wakanaka sei zvawakaita, uvabvunze kurudziro kuburikidza neLinkedIn! Ivo vanozobatanidzwa neese ega basa basa iwe rawakazadza.
Yakavanzika LinkedIn Zvimiro - Joinha Mapoka, Tora Zvinyorwa muLinkedIn uye uve shuwa kuratidza yako Slideshare Mharidzo ipapo!
Tsvaga paLinkedIn - Gadzirisa yako URL, shandisa akagadziridzwa mazita emazita emabasa, uye ubatanidze kudzokera kune yako webhu uye zvemagariro zvivakwa.
LinkedIn Mazuva ese Mazano - kupa kukosha, kugovana mazano, kubatanidza network yako kutungamira, uye kuve mutariri akanaka kunetiweki yako kunobatsira iwe kuve LinkedIn tenzi.
Chengetedza Mbiri Yako - Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuve zvibodzwa zvehurongwa hwekubiridzira uye dzakanangidzirwa kubiridzira kwechisimba. Gonesa 2-chinhu chechokwadi kuti vanhu vagone kubira account yako.
Kana iwe uchikurumidza kutsvaga chinzvimbo chitsva uye uchida kuwedzera mikana yako, iwe ungangodawo kuisa mari mukati LinkedIn Premium. Inokupa iwe kunyanya kuoneka mukati mekutsvaga kwemukati uye inoita kuti iwe ugone kuita zvimwe zvekusvikira neanotevera maficha:
InMail Meseji - nyore kubatana pamwe nekuhaya maneja.
Ndiani Anoona Mbiri Yako - ona ndiani akaona chimiro chako pamazuva makumi mapfumbamwe apfuura.
LinkedIn Kudzidza Makosi - kuwana pamusoro pe15,000 nyanzvi-inotungamirwa LinkedIn Kudzidza Makosi ekuvandudza hunyanzvi hwako kana kudzidza chimwe chinhu chitsva.
Kubvunzurudza Kugadzirira - kuvaka chivimbo chako uye kumira kune vanobatira mamaneja ane epamusoro bvunzurudzo mibvunzo, nyanzvi-inogamuchirwa bvunzurudzo mhinduro, uye nezvimwe.
Infographic neLeisure Jobs, imba yekugamuchira vaeni, mitambo uye zvekutengesa mabasa kuUK.
Tags: mabasa ekuzororaLinkedInlinkedin zvemukatilinkedin profilelinkin profile gwaralinkedin profile optimizationlinkin profile mazanogadzirisa zvakabatana
Douglas Karr Tuesday, February 9, 2021 Tuesday, January 11, 2022
Maitiro Ekutarisa Nyore, Monitor, Uye Gadzirisa Yakaputsika Links muWordPress
Iwo eTop 5 Maitiro muDhijitari Asset Management (DAM) Kuitika Muna 2021
Mar 23, 2016 pa 1: 57 AM
That’s got to be the LONGEST… I meant the most thorough infographic ever! 😉
Mar 23, 2016 pa 9: 23 AM
Ndinoziva, handiti? Asi ini ndakaverengerwa. 🙂
Apr 1, 2016 pa 1: 38 AM
Douglas , fantastic post!
Nice descriptive view of LinkedIn users who are looking for career advancement.
Apr 1, 2016 pa 8: 43 PM
Apr 30, 2016 pa 2: 45 AM
Thank you, your blog is very helpful.